हृदयाघात,मधुमेह र हड्डी खिइँने समस्याको लागि ‘एभोकाडोको प्रयोग यसरी गर्नुहोस् !!!! – live 60media
हृदयाघात,मधुमेह र हड्डी खिइँने समस्याको लागि ‘एभोकाडोको प्रयोग यसरी गर्नुहोस् !!!!
‘एभोकाडो’ फल नेपालीमा ‘घिउफल’ का नामले समेत चिनिन्छ । यो फल झलक्क हेर्दा आँप वा नासपाती आकारको देखिन्छ । यो फल गोलो र लाम्चो आकारको हुन्छ । यसको बोक्रा, गुदी र त्यसभन्दा भित्र गोलो आकारको बियाँ हुन्छ । बोक्रा र बियाँको बीचमा रहेको गुदी खाइन्छ । यो फलको स्वाद नौनी घिउ (मोही पारेर निकालेलगत्तैको नखारेको घिउ) जस्तै हुन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने यो स्वादहीनजस्तै हुन्छ ।
← त्यो हर्कत, त्यो सजाय
ब्रिटिस र सिंगापुर भर्तीको अन्तिम छनोटको लागि पोखरामा ७ सय ७० युवा बोलाइए →